Nyocha nke Samsung Galaxy S7 onu, ekwentị kacha mma | Androidsis
Anyị nyochaa Samsung Galaxy S7 ihu, ekwentị kacha mma nke ndị rụpụtara Korea rụpụtara
Manuel Ramirez | | Noticias, Nyocha
Samsung Galaxy S6 ọ pụtara ama nke mgbanwe maka onye nrụpụta Korea. Na smartphone ahụ, Samsung nwere ike wetara anyị igwefoto dị elu na ezigbo arụmọrụ n'ụzọ ọ bụla. O mechara kewaa ndị Galaxy S3, S4, na S5 ahụ, iji mepe ụzọ maka ekwentị ịbịa. Naanị ihe hapụrụ anyị obere oyi bụ batrị dị ala na enweghị ụfọdụ atụmatụ Samsung kachasị dị ka nkwụsị nke oghere kaadị microSD. O chefuru banyere nguzogide mmiri, ma ọ bụ n'ezie batrị dị ala na enweghị ike ịbawanye nchekwa dị n'ime ya na ọ natara ụfọdụ nkatọ.
Na Samgung Galaxy S7 ihu, ụlọ ọrụ Korea etinyewo anụ niile na imi ihe ma ọ wetala ihe kachasị mma nke S6 iji dozie ihe ndị ahụ na-adịghị mma dịka batrị dị ala na enweghị mgbochi mmiri na oghere microSD. Ama ama a na nsụgharị njedebe bụ ngwaọrụ nke mmadụ nwere ike ịju anya na ịdị mma nke ihe niile ọ nwere n'ozuzu ya. Ọ bụ naanị ekwentị kacha mma n'ahịa ma taa ka ọnụ ọgụgụ ahịa ya na-akwado ya. Ma ọ bụ na ọbụna onye na-emepụta Korea ewerela nnwere onwe nke ime ka mkpuchi Touchwiz dị ntakịrị, otu n'ime isi ihe adịghị mma nke ika ahụ yana na S7 ihu, n'agbanyeghị na ọ ka dị arọ, ọ na-egosi n'ụzọ ọzọ.
1 Ezigbo ekwentị
2 Njirimara igodo
5 Ihe Nlere Igwefoto
5.1 Ndị dị n'elu
5.2 Nhọrọ na-elekwasị anya
5.3 Igwe foto
8 Uche ederede
Site na smartphone nwere usoro nke ezigbo njirimara, ọ na-eduga n'ọtụtụ ojiji, ọ dịkwa na batrị ahụ ebe ọ dị dịwanye mma karịa mbipụta gara aga. 4 na ọkara awa nke ihuenyo na-enweta n'ụzọ mmesapụ aka na ojiji ojiji na ọ bụrụ na mmadụ ejighị ya nke ukwuu, na ọnọdụ ụra ọ chọpụtara na ọnọdụ doze na-eme ihe ya. Ma ọ bụ na ọ bụrụ na ị na-eji ọnụ maka WhatsApp, netwọk mmekọrịta, ụfọdụ foto, otu egwuregwu ma ọ bụ ọzọ, ị ga-eru ụbọchị abụọ ọ fọrọ nke nta na-amaghị. Eziokwu nke a na-enye ihe pụrụ iche maka S7.
Samsung achọghị ịda ihe ọ bụla ma tinyekwa ya microSD iji gbasaa 32 GB ndị ahụ na ọ na-eweta na ndabara. Okpokoro maka buns adịghị ebe ahụ ugbu a iji weta ihe kachasị mma na ama mgbe enwere ọtụtụ ndị ọrụ na-eche nke ọma banyere ịmalite etiti dị nso nke na-eru nso na atụmatụ, yabụ onye na-emepụta Korea chọrọ ịmalite nke kacha mma ka enwere enweghị mgbaghara maka inweta ya.
Ọ bụ ama kachasị mma na ahịa ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ikwu maka ya magburu onwe igwefotoAnyị enweghị ike ichefu banyere njedebe ya ma ọ bụ ihuenyo ahụ ugbu a bụkwa nke kachasị mma na enweghị ngwaọrụ ọzọ na-abịaru ya nso. Na imewe ahụ, ọ bụrụ na anyị na-eche maka Nkọwa 5 nke ga-agụnye nsụgharị nsụgharị, nsụgharị S7 a bụ nke na-eme ka anyị nwee ike iji akụkụ ndị gbagọrọ agbagọ dị elu.
Ọ bụ naanị nlereanya ekwentị Onye na-ele anya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite otu iji weta ahịa kacha mma. Ọ dị ka nke ahụ, ọ nweghịkwa ihe ngọpụ ịghara inweta ya ma ọ bụrụ na mmadụ chọrọ nke kacha mma na teknụzụ ngwaọrụ mkpanaka.
Na S7, Samsung ọ gara iko dị ka ihe nke na-amịpụta ihe kachasị mma na nke ahụ na-eguzogide ọgwụ. Igwe a na-egosikwa atụmatụ nke S7 na nke a pụtara na mgbe ị wepụrụ ya n'akpa ma ọ bụ akpa, ọ na-adọta anya ndị enyi ma ọ bụ ebe ọ bụla anyị nọ. Ọ bụ ama mara mma.
N'ezie ugbu a O siri ike anyị iche n'echiche ihe Samsung ga-eweta na Galaxy S8 gburugburu imewe, nke dị na mbipụta ahụ na-atụ anya iweta mgbanwe doro anya. Ọ bụ ezie na anyị maara na ọnụ ga-abụ usoro ị ga - agbaso, ọ bụ n'ezie mgbaghara kachasị mma ịghara ịgbanwe. Nkatọ ga-adakwasị ya n'agbanyeghị.
una gosipụta nits 855 nke nchapụta ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmụọ. Ọ bụ otu n'ime akụkụ nke ekwentị ahụ na-ahapụ gị dị mgbagwoju anya na na mgbe ị jiri ya na ngwaọrụ ndị ọzọ, ị ga-ahapụ na-ele ha anya dị ka ihu ọjọọ. Ugbu a ọ bụ ihuenyo kachasị mma na ahịa ma ọ bụrụ na ọ dịlarị n'etiti ụlọ mmanya ọ na-arụpụta nnukwu mmetụta, n'ogo kachasị ọ na-adọrọ mmasị ihe Samsung mere na ekwentị a.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ihuenyo kachasị mma n'ahịa, anyị nwekwara ike ikwu nke ahụ igwefoto bụ ihe kacha mma ugbu a n’ime ndị niile na-azọ ya. Ikekwe na ọnọdụ ntuziaka nke LG G5, ọ bụ esemokwu, mana ọ bụ n'ọnọdụ ọnọdụ dị ala na mmetụta nke ọkụ igwefoto na enwere ike ịchọta nsonaazụ dị mma. Ọ bụrụ na ị nọrọ ọtụtụ oge na oghere ebe obere ọkụ dị, ọ bụ ekwentị zuru oke iji cheta abalị ndị ahụ anwansi na ndị enyi n'oge okpomọkụ a.
The foto nke Galaxy S7 nwere ngwoolu na sharpness na a Tinye akara na saturation agba, ma ọ bụ na akpaka mode ebe anyị nwere ike ịnụ ụtọ dị ka dwarfs mgbe ewere ngwa ngwa captures, ebe ọ bụ na autofocus ebe igwefoto nke a ama na-anọchi. Pịa ugboro abụọ n'ụlọ wee gbaa nke abụọ, gịnị kpatara ịchọrọ karịa?
touchwiz Ọ dị ọkụ na nke a bụ nnọọ kwesiri ngosi. Ọ ka dị arọ, ee, mana Samsung na-eru nso iji nye ngwanrọ nke anaghị anwa ịhapụ onwe ya nke ukwuu site na ezigbo gam akporo, ọ bụ ezie na ọ bụ otu n'ime ihe kachasị iche. Arụmọrụ nke ama a dị egwu ma na ụdị ọrụ ọ bụla agaghị ahapụ anyị na gutter, mana n'ụzọ ọzọ gburugburu, anyị ga-efe ya maka ụdị ọrụ niile.
Ihe ngosi ole na ole dokwuo ya anya.
Samsung Galaxy S7 m gbaziri n’aka Samsung bịara na ihe mmetụta Sony IMX298 na CPU bụ Exynos 8890. Ihe data AIDA64 maka igwefoto, CPU na ihuenyo.
Akwa ihuenyo, igwefoto dị ukwuu na batrị nke na-enye anyị ohere iji ihe abụọ ahụ mezuo nke ọma. Iji elu anyị nwere ike nọrọ ụbọchị zuru oke, yabụ ọ bụ ama na ọ fọrọ nke nta ka ọ tinye na ihuenyo oge ọ bụla anyị gbanyere ya na nkwupụta "Jiri m".
Ihe kwesiri ntukwasi obi bu ojiji eji enye ya a nnwere onwe dị ukwuu mgbe ị na-ehi ụra. Maka ndị ọrụ ahụ na-eji ekwentị ha n'oge ụfọdụ ụbọchị, ha nwere ike ịmaraworị na ha ga-abịarute ụbọchị ahụ n'ụzọ zuru oke.
Ihe Nlere Igwefoto
Anyị nwere na azụ a 12 MP 1 / 2,5 ″ igwefoto, nke bụ ihe mmetụta kariri S6. Site na inwe obere mkpebi, ọ na-eme ka pikselụ buru ibu. Site na 1.4 um anyị ga-enweta 95% karịa ọkụ, yabụ anyị nwere ike ịghọta ihe kpatara na obere ọnọdụ ọkụ ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Ohere f / 1.7 iji nweta a 25% na-enwu gbaa na autofocus di elu na Dual Pixel. The autofocus ọsọ bụ n'ezie pụtara ìhè, ịbụ ugboro atọ ngwa ngwa karịa Samsung Galaxy S6.
Foto ndị dị n'okpuru belatara 1600 x 900.
Ndị dị n'elu
Nhọrọ na-elekwasị anya
Mgbe anyị chọrọ ịnụ ụtọ ngwaọrụ kacha mma maka ịkpọ ọdịnaya ọdịnaya, anyị kwesịrị ihu igwe na ngwaike kachasị mma nke ọkọ. Lee ihe Galaxy S7 ihu bụ na-adọrọ mmasị na ọkwa niile. Egwuregwu vidio, usoro TV, ihe nkiri ma ọ bụ ikiri YouTube site na ama a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwu.
Dị ka m kwuru na mbụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ihe kacha mma n'ahịa, maka multimedia na S7 kwuo okwu ndị ka ibu.
Anyị nwere ike ikwu maka ihuenyo ya, igwefoto, arụmọrụ, imewe ma ọ bụ usoro omume ọma ndị ọzọ. Ma anyị nwere ike ịnọnyere ya nguzo ya n'ozuzu ya ịkpọrọ anyị gaa na Samsung kachasị mma Samsung merela. Nhazi ahụ na-enyere ya aka ịchịkwa ngwụcha ngwụcha nke anyị niile mara na onye ọ bụla na-emehie nke ihe. Ogwe S7 nwekwara nkwarụ ya, mana ha adịghị mkpa ma daba na ụfọdụ mkpa nke onye ọrụ akọwapụtara.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere nkọwa na tinye icing na achicha, ihuenyo "mgbe niile," nke nwere ike iyi nzuzu na mbụ, mechara bụrụ mmezi nke ọnụ na anyị enweghịzi ike ịnwe. Site na ịghara ịgbanye ekwentị iji mara oge ahụ, anyị ga-echekwa nke ahụ na batrị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ atụmatụ a anyị ga-enwe n'oge niile nwere ike iri, yana ozi ndị ọzọ.
Samsung achọghị ịhapụ ihe ọ bụla n'azụ ọ makwaara na ọ chọrọ nkà ya kachasị mma iji mepụta smartphones n'oge oge siri ike maka ahịa a. Ọ bụ ya mere o ji wetara anyị ngwaọrụ kachasị mma nke ọ nwere ike ịmalite na ahịa. Ekwentị nke mmadụ nwere ike ịdaba na ya.
Samsung Galaxy S7 ihu
Ngosipụta ya magburu onwe ya
Foto ndị dị egwu
Nnukwu nnwere onwe
S8 na-apụta n'oge na-adịghị anya
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Anyị nyochaa Samsung Galaxy S7 ihu, ekwentị kacha mma nke ndị rụpụtara Korea rụpụtara
oké ụjọ dijo
Achọrọ m otu, ego ole ka ọ na-eri?
Maka € 644 ị nwere ya ugbu a na Amazon. Daalụ!
Ihe niile banyere Fallout Shelter, egwuregwu Bethesda na-eme ka mmelite
[APK] Kpachara anya !! Pokeradar maka Pokemon Go dị ugbu a na Storelọ Ahịa Play na APK